कलेजोको महत्व र काम - Jyoti News
कलेजोको महत्व र काम
ज्योति न्यूज२०७७, ३१ श्रावण शनिबार ०६:१२
डा. लव श्रेष्ठ
१.पित्त रसको उत्पादन तथा स्रावः कलेजोले पित्त रस बनाउँछ। पित्त रसले गर्ने कार्यहरु यस प्रकार रहेका छन्ः
१.रक्सी सेवनः रक्सीको मेटाबोलिजमबाट निस्कने विभिन्न किसिमका रसायनहरुले कलेजोमा रियाक्टिभ अक्सिजन स्पिसिजहरुको उत्पादन बढाउँछन्। यी रियाक्टिभ अक्सिजन स्पिसिजहरुले हेपाटोसाइट्सहरुलाई नष्ट गर्छ। साथै रक्सीले विभिन्न रसायनिक क्रियामार्फत कलेजोमा बोसो जम्मा हुने प्रक्रियालाई पनि बढाइदिन्छ। यी कारणले कलेजोको कार्यक्षमता कम हुँदै जान्छ।
२.अनावश्यक औषधि सेवनः कतिपय औषधिहरु कलेजोका लागि हानिकारक हुन्छन्। यसको सामान्य उदाहरण प्यारासिटामोल हो। यदि प्यारासिटामोल औषधि अत्यधिक मात्रामा सेवन गरेमा यसले कलेजोमा हानि पु¥याउँछ। कलेजोलाई हानि गर्नसक्ने अन्य औषधिहरुमा डाइक्लोफेनाक, क्षयरोगको उपचारमा गरिने रिफ्याम्पिसिन, आइसोनियाजिड जस्ता औषधि पर्दछन। यस्ता औषधि अनावश्यक रुपमा र चाहिनेभन्दा बढी मात्रामा सेवन गरेमा कलेजोलाई हानि पु¥याउन सक्छन्।
(डा. श्रेष्ठ महाराजगञ्ज चिकित्सा क्याम्पसका उपप्राध्यापक हुन्। ) : यो लेख स्वास्थ्य खबर पत्रिकाबाट